တစ်ဘဝလုံးစာရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေသာဖြတ်ကျော်နိုင်မဲ့ အချစ်ရဲ့အဆင့် ( ၅ ) ဆင့် - XYZ NEWS
တစ်ဘဝလုံးစာရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေသာဖြတ်ကျော်နိုင်မဲ့ အချစ်ရဲ့အဆင့် ( ၅ ) ဆင့်
February 16, 2020 By Editor LOVE
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်ဟာ ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ စုံတွဲတွေမှာ များသော အားဖြင့် တစ်ယောက်ကထိခိုက်လွယ်တတ်ပြီး အဲ့ဒီအတွက်သင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကို မြင်နိုင်အောင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဆင့် ၁ : လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အချစ်
သင့်ရဲ့နံရိုးလေးကို ရရှိလိုက်တဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာ အားလုံးဟာ ပျားရည်လိုချိုမြနေတယ်။ ချစ်သူလေးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ လိပ်ပြာလေးတွေဝဲနေပြီး အနမ်းလေးတွေ၊ အထိအတွေ့လေးတွေအကုန်လုံးဟာ အရူးအမူးဖြစ်စေတယ်။ မိနစ်တိုင်းသူ့ဆီကမက်ဆေ့လေးတွေမျှော်နေမိတယ်။ နဲနဲရူးကြောင်ကြောင်နိုင်ပေမဲ့ ဘယ်သူ့ဂရုစိုက်ရမှာလဲ.. အချစ်မှာလူတိုင်းရူးကြတာပဲ။ အဲ့လိုတွေခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အချစ်တစ်ခုရှိနေတာ သေချာပါတယ်။
အခုခံစားနေရတာလေးကို မှတ်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ကျရင် ဒီအမှတ်တရလေးတွေနဲ့ အချစ်ကိုပြန်လည်လန်းဆန်းအောင်လုပ်နိုင်အောင်လို့ပါ။
အဆင့် ၂ : အခြေကျသွားပြီ
တကယ့်ကို အတည်ဆိုတာသေချာသွားပြီဆိုရင် အဆင့် ၂ရောက်သွားပါပြီ။ လက်တွဲဖော်တွေဖြစ်သွားပြီလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ဟာ ဘဝဟာ အမြဲတမ်း ပျော်စရာတွေပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာမဲ့အချိန်ပါ။ အချိန်တွေကို တက်နိုင်သမျှအတူတူကုန်မယ်။ အတွေးလေးတွေကိုပြောပြကြမယ်။ ချစ်သူလေးရဲ့ နေ့ဟာ အဆင်ပြေရဲ့လားမေးမယ်။ သူရဲ့အဖြေတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားနားထောင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေဖြစ်သွားခြင်းဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေရဲ့ ဖျားနာခြင်းပါ။ ခရီးသွားတာနဲ့ အခြေချနေထိုင်ဖို့သွားတာ ကွာသလိုပါပဲ။ ပန်းတိုင်ခြင်းတူပေမဲ့ တာဝန်တွေကတော့ လုံးဝကွဲပြားသွားပါပြီ။
နှစ်ယောက်ကြားထဲက အလင်းရောင်လေးတွေမှိန်မသွားပါစေနဲ့။ နှစ်ယောက်တည်းလုပ်စရာလေးတွေ စဉ်းစားထားပါ။ လမ်းအတူတူလျောက်တာလေးတွေ၊ ရုပ်ရှင်အတူတူကြည့်တာလေးတွေ လုပ်ပေးပါ။ နှစ်ယောက်ကြားကကြိုးလေးကို ထိန်းသိမ်းထားပါ။အဲ့ဒါလေးတွေက အရမ်းထူးခြားပြီး အရမ်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ်။
အဆင့် ၃ : လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေနဲ့ စိတ်ပျက်စရာတွေတွေ့လာရခြင်း
သင့်ရဲ့ ကိုယ်တစ်ခြမ်းအပေါ်မှာခံစားချက်တွေတော့အပြည့်ရှိသေးတယ် ဒါပေမဲ့ နဲနဲတော့ကွဲပြားသွားတယ်။ အချိန်တွေအတူတူကုန်ဆုံးရတာက အရင်ကလောက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့ဘူး။ တာဝန်တွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ အလုပ်ထဲမှာပဲနစ်နေတာတွေ၊ ကြည်နူးစရာတွေကြားထဲမှာ အိမ်အလုပ်တွေညပ်လာတာတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာသင့်ကို ထောင်ချောက်မိနေသလိုခံစားလာရလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်ဟာ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု မှန်မှမှန်ရဲ့လားလို့ပြန်တွေးမိတဲ့အချိန်ပါပဲ။ Relationship တစ်ခုရဲ့ အန္တရာယ်အကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအပိုင်းကိုအတူတူဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ရင်တော့ နောက်ပိုင်းမှာအခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
မီးတောက်လေးငြိမ်းမသွားအောင်ဆက်ပြီးကြိုးစားနေပါ။ သင့်ရဲ့ယခုလက်တွဲဖော်ဟာ အရင်အတည်းကသင်ချစ်ခဲ့တဲ့သူပဲဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ရည်းစားဖြစ်ကာစအချိန်က ကြည်နူးစရာလေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားပါ။ နောက်ပြီးသင့်ဘဝဟာ ကလေးတွေအတွက်ချည်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးတွေလဲရှိသင့်ပါတယ်။
အဆင့် ၄: တည်ငြိမ်မှု
ဒီအဆင့်ရောက်သွားရင်တော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမှန်အတိုင်းမြင်နိုင်လာပြီး သင့်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိလာပါပြီ။ ပထမအဆင့်တုန်းကလို တိမ်တွေပေါ်မှာ ကစားနေရသလိုမျိုးခံစားမှုတွေ ရှိတော့မှာမဟုတ်ပေမဲ့ တတိယအဆင့်ရဲ့ ကံဆိုးမှုတွေဟာလည်း ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လွတ်လပ်မှုလေးတွေပေးဖို့ လိုတာကိုလည်းနားလည်လာပါပြီ။ သင့်လက်တွဲဖော်မှာလည်း သူကြိုက်တာမကြိုက်တာလေးတွေ၊ ဝါသနာပါတာလေးတွေ၊ အကျင့်လေးတွေရှိမှာပဲ။ နှစ်ယောက်က နေရာတိုင်းမှာစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ပုံစံလေးနဲ့နေထိုင်ပြီး ကြိုးလေးကိုသာထိန်းသိမ်းထားပါ။
အဆင့် ၅: ကတိကဝတ်ပြုခြင်း
ဒီအဆင့်အထိကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နှစ်ယောက်ဟာ တကယ့် တစ်သက်တာအဖွဲ့လေးသွားပါပြီ။ အရင်တုန်းကလို ရူးရူးမိုက်မိုက်ချစ်တာလေးတွေကိုပြန်လိုချင်တာမျိုးတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ပဲ လက်ရှိဆက်ဆံရေးနဲ့ အရမ်းကိုသက်တောင့်သက်သာရှိနေမှာပါ။ နဲနဲလေးပြောင်းလဲဖို့ကိုတောင် စဉ်းစားချင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အားနည်းချက်လေးတွေနဲ့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာပြည့်စုံနေကြတာကို လက်ခံနိုင်သွားကြတယ်။
ချစ်ခြင်းတွေကို တစ်ဘဝလုံးဘယ်လိုထိန်းသိမ်းခဲ့လဲဆိုတာ သားသမီးတွေကို သင်ပေးပါ။ အခက်အခဲဆိုတာသေချာပေါက်ရှိမှာပဲ ဒါပေမဲ့ အချစ်စစ်ဆိုရင်ဖြတ်ကျော်နိုင်မှာပါ။
သင့်မှာကော ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေအကြုံတွေရှိလား? အတွေ့အကြုံတွေမျှဝေခဲ့ပါဦး..
Writer -Min Thu ( XYZ News )